Mogadishu Journal » Tababaraha Man City Guardiola ayaa ka walwalsan ‘tayada cajiibka ah’ ee Dortmund
Pep Guardiola ayaa uga digay ciyaartoydiisa Manchester City inaysan si fudud u qaadan Borussia Dortmund iyo “tayadooda cajiibka ah” talaadada lugta hore ee wareega 8da Champions League.
City ayaa ka reebtay kooxda ay xafiiltamaan ee Dortmund ee ka ciyaarta Bundesliga Borussia Monchengladbach si ay u xajiso booskeeda sideed dhamaadka, halka Die Schwarzgelben ay ka gudubtay Sevilla.
Waxay noqon doontaa kullankii ugu horreeyay ee ay labadan koox kulmaan tan iyo heerkii group-yada ee xilli ciyaareedkii 2012-13, kaasoo barbaro 1-1 ah ku galay Etihad Stadium iyo 1-0 ay ku badisay Dortmund ciyaartii ka dhacday Jarmalka.
In kasta oo todobo kulan oo isku xigta aan laga badinin Champions League, Dortmund waxa ay soo martay olole maxalli ah oo adag, sabtidii guuldaradii 2-1 ee ka soo gaartay Eintracht Frankfurt ayaa ka dhigeysa inay 7 dhibcood u jiraan booska afaraad.
Guardiola ayaa sifiican u yaqaana Dortmund, isagoo si joogta ah uga hor yimid intii uu ahaa tababaraha Bayern Munich intii u dhaxeysay 2013 iyo 2016, waxaana uu ku adkeysanayaa inuusan fududeysan doonin kooxda Edin Terzic, iyadoo aan loo eegin dhibaatooyinka ay ka qabaan horyaalka.
“Haddii hal qof oo Manchester ah uu garanayo Dortmund, aniga waa aniga,” ayuu ku sheegay shirkiisa jaraa’id. Dhaqanka kooxdan, sida ay u ciyaarayaan, mana heli doono hal ciyaartoy oo ka socda Dortmund oo aan tayo lahayn.
“Lacag badan ayey ku qarash gareeyaan ciyaartoy da’ yar waxayna lacag badan ku bixiyaan wakiilada si ay ciyaartoydan u keenaan halkaas maxaa yeelay waxay leeyihiin tayo aan caadi aheyn.
“Laga yaabee inaysan ka helin isku dheelitirnaanta Bundesliga xilli ciyaareedkan, laakiin hal kulan ama labo kulan ayay awoodaan inay wax uun qabtaan.
“Waxaan aragnay midaan la ciyaareyno Sevilla. Sevilla wey taqaanaa tartamada yurub sida kooxo yar oo yurub ah; waxay ku guuleysteen seddex Europa League oo isku xigta.
Waxaan ku ixtiraamayaa waxa ay Dortmund sameysay. Waxaan joogay Jarmalka seddex sano; Waan ogahay tayadooda. ”
Bartamaha rajada Dortmund ayaa noqon doonta Erling Haaland, kaasoo dhaliyay mid kasta oo ka mid ah lixdii kulan ee ugu dambeysay Champions League.
Vjosa Osmani oo loo doortay Madaxweyne cusub muddo shan sano ah (Sawirro)